‘खानामा अरु छुटोस्, साग छुट्नु भएन’, कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठको ‘फिटनेश’ राज पढ्नुहोस् - Nepalgunj Business
‘फिट एण्ड फाईन’ कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको सदावहार परिचय हो । उमेरले ५० वसन्त पार गरेपनि कुनै लक्का जवान भन्दा कम देखिन्न् । व्यवसाय होस् चाहे सामाजिक काम श्रेष्ठको दौडधुपमा कुनै कमी छैन । आफ्नो ब्यापार छदैछ । उद्योगी, व्यवसायीको नेता भएकाले त्यसमा पनि हिड्नै पर्यो । उनी छातासंगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको केन्द्रीय सदस्य हुन् । जिल्लाको विकास निर्माणको काममा पनि खबरदारी गर्दै आएका छन् । ‘फिट’ शरिर सहित अनुहारमा मन्द मुस्कान बोकेर हिड्ने श्रेष्ठको ‘फिटनेश’को राज खोल्ने प्रयास गरेका छौं ।
‘संधै फिट’ देखिनुहुन्छ नी ? यसको राज के हो ?
म फिट नै छु त (मुस्कुराउँदै) । फिट भनिसकेपछि खुःसी हुनै पर््यो । यसका लागि लागि धन्यबाद । हरेक मान्छे फिट त हुनैपर्छ । फिटनेश भन्ने कुरा देखाउनका लागि मात्र होइन स्वास्थ्य हुनका लागि हरेक मानिसलाई अत्यावश्यक छ । स्वास्थ्य भन्दा अरु ठुलो कुरा मान्छेको जीवनमा के नै हुन्छ र ? तर फिट हुन भने जस्तो सजिलो भने छैन । फरक जीवनशैली अपनाउन जरुरी छ । फिट रहन धेरै उपाय छन् । अनुशासित जीवन शैली अपनाउने कुरा मुख्य हो । खानपिनमा ध्यान दिनुप¥यो, शारिरिक कसरत गर्नु¥यो, ध्यान, योगामा लाग्न जरुरी छ । यि कुराले मात्र पुग्दैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा त सकारात्मक सोंच बनाउनुपर्यो । खानपिन, शारिरिक कसरत, सकारात्मक सोंचमा ध्यान पु¥याउन सकियो भने भने धेरै कुरा पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
तपाईको फिटनेशमा खानपिनको महत्व कति छ ? खानपिनमा कत्तिको ध्यान दिनुहुन्छ । सबैभन्दा बढि के रुचाउनुहुन्छ ?
स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउन खानपिनको महत्व धेरै छ । सबै कुरा खानपिनले नै निर्धारण गर्छ । त्यसैले यसमा बिशेष ध्यान दिन्छु । ब्यस्त छु भन्दैमा जे भेट्यो त्यही खाईहाल्ने गर्दिन । कामलाई पनि महत्व दिन्छु तर त्यसो भन्दैमा मेरो स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल हुने गरी खानपिनलाई बेवास्ता गर्न सक्दिन म ।
खानपिनमा रोटी बढि रुचाउँछु । भात त छदैछ । भात नहोस् तर रोटी भए पुग्छ । भात भन्दा रोटीले स्वास्थ्यलाई धेरै राम्रो गर्छ । रोटीमा गहँु, मकै, फापरको पनि घरमा बन्छ । प्यूठानमा जन्मेको मान्छे सानो छंदा मकैको रोटी खाईन्थ्यो । निकै मिठो र पोसिलो हुन्छ त्यो । अहिले पनि घरबाट मकैको पिठो पठाईदिनुहुन्छ । यहाँ बनाएर खान्छु । मकै, फापर जस्ता पहाडमा पाइने हरेक कुराहरु बजारमा पाईन्छ अहिले । त्यहाँबाट किनेर ल्याउन सहज भएको छ ।
मैले भुटेको मकै त्यसमा अझ भटमास हालेको खुबै मन पराउँछु । त्यो कहिल्यै छुट्दैन घरमा । खाना रोटी होस् चाहे भात साग भने कहिल्यै छुट्दैन । साग मेरो लागि खानपिनमा बिशेष हो । जुनसुकै होस् तर मलाई साग चाहिन्छ । दिनमा चार पटक भए पनि हुन्छ । हरियो सागको महत्व कति हुन्छ मैले भनिराख्नु पर्दैन । यसले पेट सफा गर्छ । शक्ति दिन्छ । सानैदेखि साग मनपर्छ । घरमा मेरै कारणले गर्दा होला सायद अरुले पनि साग मन पराउँन थालेका छन् । रायो, पालग, भाजी जस्ता साग बिशेष लाग्छ । हाम्रो घरको भान्सामा साग कहिल्यै खाली हुँदैन । माछा, मासु, दुध, दहिमा पनि मेरो बिशेष रुची छ । दुध, दही पनि साग जस्तै कहिल्यै छुटाउदिन ।
भान्सामा पकाएर ठिक्क पारेको खानामा मात्र रुची होकी आफै पनि कहिल्यै पकाउँनुहुन्छ ?
हाहा कहाँ त्यस्तो गर्नु ( हाँस्दै) ? म बजारबाट आफै तरकारी बोकेर ल्याउँछु । अनि भान्सामा बसेर मिठे पकाउने पनि गर्छु । खाना पकाउने कुरामा कुनै झण्झट मान्दिन । स्टक रहेको तरकारी भान्सामा नहेरी ल्याउँदा धेरे पटक गाली पनि खाएको छु । साग संधै ल्याउँछु । साग खानमा मिठो भएपनि बनाउन निकै झण्झटको हुन्छ । बिन्नु पर्छ । घरमा यही कारणले गर्दा रिसाउँछन् की जस्तो लाग्छ । तर अब मेरो सागप्रतिको रुची देखेर घरका मान्छे पनि बानी परिसके । म मासु पकाउन निकै रुची राख्छु । मासु फ्राई, माछा, सुकुटी बनाएको छु ।
तपाई त यस क्षेत्रकै राष्ट्रिय तेक्वान्दो खेलाडी पनि हो । यसले पनि फिट रहन सहयोग ग¥यो होला नी ?
अबश्य पनि हो । पहिले मध्यपश्चिमको प्रतिनिधित्व गदै राष्ट्रिय खेलहरुमा सहभागि भएको थियो । खेलले मान्छेलाई स्वास्थ्य रहन सहयोग पु¥याउँछ । मलाई फिट रहन यसले साथ दिएको छ । अहिले पनि म निरन्तर मर्निङ्ग वाक गर्छु । यसले शरिरलाई उर्जा दिन्छ । योगा र ध्यान गर्न कहिल्यै छुटाउदिन । यसले स्फुर्ती प्रदान गर्छ ।
सकारात्मक सोंचको कुरा के हो ?
खानपिन राम्रो छ अनि शारिरिक ब्यायम गरेर मात्र पुग्दैन । अरु सबै ठिक छ तर सोंच ज्यादै खराव र नकारात्मक भयो भने त्यसको केही अर्थ छ र ? सकारात्क सोंच राखौं । यसले तपाईको दिमाग र शरिरलाई छुट्ै उर्जा दिन्छ । जीवनलाई सही मार्गमा लैजान सहयोग गर्छ । जहिल्यै नकारात्मक भइयो भने जीवन कहिल्यै सकारात्मक हुँदैन ।
अन्त्यमा व्यापार व्यवसायमा स्वास्थ्य जीवनशैलीको महत्व कति छ र अरुलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
स्वास्थ्य हुन सक्नुभयो भने त ब्यापार व्यवसाय गर्ने हो । अझ व्यापार व्यवसाय मात्र होइन हरेक कुरा भन्नुहोस् । जे कुरा गर्न चाहे पनि स्वास्थ्य शरिर चाहियो । त्यसका लागि स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउनतिर लागौं । फुसदै छैन भनेर स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउन छाड्नुभयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । फुर्सद निकाल्नुहोस् फिट एण्ड फाईन बन्नतिर लाग्नुहोस् ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, फाल्गुन ११, २०७५ 1:07:29 PM